सञ्चालनमै नआई काम नलाग्ने भए राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका २६ डायलाइसिस मेसिन – Health Post Nepal
सञ्चालनमै नआई काम नलाग्ने भए राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका २६ डायलाइसिस मेसिन
२०७६ वैशाख १ गते ११:५०
भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि खरिद गरिएका करोडौं मुल्यका डाइलासिस मेशिन सञ्चालनमै नआइकन काम नलाग्ने भएका छन् । चलाउने जनशक्ति र जडान गर्ने स्थान अभाव भएको अवस्थामा पनि केन्द्रले ठूलो संख्यामा किनेका उपकरण सञ्चालनमै नआई बिग्रिएका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले केन्द्रका ६१ मेसिनमध्ये २०७५ आषाढ मसान्तमा ३५ मेसिन मात्र सञ्चालनमा रहेको औल्याएको छ । सञ्चालनमा नआएका मेसिनमध्ये १५ को सञ्चालन आयुसमेत समाप्त भएको महालेखाले जनाएको छ । तीबाहेक ११ मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको र मेशिन मर्मतमा ध्यान नदिँदा मेसिनको अभावमा बिरामीलाई डाइलासिसको लागि अन्यत्र सिफारिस गर्नु परिरहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले केन्द्रका ६१ मेसिनमध्ये २०७५ आषाढ मसान्तमा ३५ मेसिन मात्र सञ्चालनमा रहेको औल्याएको छ । सञ्चालनमा नआएका मेसिनमध्ये १५ को सञ्चालन आयुसमेत समाप्त भएको महालेखाले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अस्पतालमा भएका उपकरण बनाउँन भन्दा धमाधम उपकरण किन्नमा प्रशासनको चासो छ । नयाँ खरिदको विषय प्रत्यक्ष रुपमा कमिसनसँग जोडिएको हुन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ मेसिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्दा समेत दैनिक अधिकतम १२० जनाले मात्र सेवा लिन सक्ने अवस्था छ । महालेखाले परीक्षणको समयमा जाँदा पर्याप्त मेसिन अभाव, पूर्वाधार तथा जनशक्तिको कमीको कारण १४५ जना बिरामी हेमोडाइलासिस गर्न, ६८ जना मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न र २ जना पियर एक्सचेन्जको लागि प्रतीक्षामा रहेको जनाएको छ ।
केन्द्रले एक वर्षमा वर्ष २९ हजार २८० पटक डाइलासिस सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।
नयाँ भवन निर्माण बजेट खर्च भएन
भक्तपुर अस्पतालको भवनमा बस्दै आएको केन्द्रका लागि नयाँ भवन बनाउँन सरकारले ३ करोड २५ लाख विनियोजन गरेपनि कुनै काम नभएको महालेखाले औल्याएको छ । अस्पतालको नयाँ भवन ड्रइङ डिजाइन, भवन निर्माण विस्तार र निर्मित भवनमा आवश्यक उपकरण जडानसमेत गर्न रु.३ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा सोसम्बन्धी कुनै काम नभएको पाइएको छ ।
प्रत्येक वर्ष मृगौलासम्बन्धी बिरामीको संख्या वृद्धि हुँदै गएकोले हालको अस्पताल भवनबाट सेवा प्रवाह गर्न असुविधा भइरहेको छ । शहीद धर्मभक्त राष्ट्यि प्रत्यारोपण केन्द्रले यो वर्ष मृगौला प्रत्यारोपण १५३ जना, ओ.पी.डी. सेवालगायतका अन्य सेवा ३१ हजार ५६५ जनालाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र
2 thoughts on “सञ्चालनमै नआई काम नलाग्ने भए राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका २६ डायलाइसिस मेसिन”
I cannot condemn enough these kind of fake news circulating in these media with no credibility.anyone who is willing to see the ground reality can visit the centre and see the work by themselves.we asaconcerned citizen cannot let these worthless newspaper to criticize the work of doctors without any verification and proof.this isadisgrace.
Sabi Basnet says:
एस्ता भ्रामक समाचार प्रस्तुत गरेर पत्रकारज्युले कस्तो सन्देश दिन खोज्नु भएको हो बुझ्न सकिएन । आँफै एकजना सेवाग्रहु भएर हेर्नुहोस् अनी तपाइलाई थाहा हुनेछ अनी महसुस हुनेछ मिर्गौला फेल भनेको के हो भनेर ??? तेत्तिकै वास्तबिकता बिना आफ्नो मनमा जे आयो त्यही समाचार लखेदिने ??? हामी मिर्गौला रोगसंग सरोकार राख्ने मनिषाहरु तथा मिर्गौला रोग पीडितहरु चुनौती दिन्छौ कि कहानिर अनियमितता भएको छ भनेर । केही आफ्नो स्वार्थ पुर्ती नभएको झोंकमा यस्ता समाचारहरु प्रकाशन नगरेको राम्रो ।